Ukuthengisa Kokuqukethwe Kuthinta Kanjani Izinga Lokucinga | Martech Zone
Ukuthengisa Kokuqukethwe Kuthinta Kanjani Izinga Lokucinga
NgoLwesithathu, Februwari 12, 2014 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 11, i-2014 Douglas Karr
Njengoba ama-algorithms ezinjini zokusesha eba ngcono ekuhlonzeni nasekubekeni okuqukethwe okufanele, ithuba lezinkampani ezibandakanya ukumaketha kokuqukethwe likhula ngokwengeziwe. Lokhu infographic kusuka I-QuickSprout yabelana ngezibalo ezithile ezingakholeki ezingeke zanganakwa:
Izinkampani ezinamabhulogi ngokujwayelekile thola ukuhola okungaphezulu kuka-97% kunezinkampani ezingenamabhulogi.
61% yabathengi uzizwe ungcono ngenkampani lokho kune-blog.
Ingxenye yabo bonke abathengi ithi ukumaketha kokuqukethwe kube ne- umthelela omuhle esinqumweni sabo sokuthenga.
Amawebhusayithi anamabhulogi anakho Amakhasi angama-434% ngaphezulu anezikhombo ngokwesilinganiso kunalabo abangenawo.
Ukuseshwa kwemisila emide zikhuphuke ngama-68% kusukela ngo-2004.
Kulula impela… okuqukethwe ukudla okuxhomeke kukho. Nikezela ngokudla okuvamile, kwakamuva futhi okufanele futhi, ngokuhamba kwesikhathi, isiza sakho sizokwakha izinjini zokusesha, siklelise kangcono, futhi sibuyisele ithrafikhi efanele kusayithi lakho.
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweamakhasi akhonjisiweumsila omudeamazinga okuseshaseo
Amathiphu aphezulu wokubhala imilayezo ye-SMS ephumelelayo
I-HeatSync: I-Enterprise Competitive Intelligence kanye ne-Analytics